Eyona ndlela ibalaseleyo yokubonisa amaTshayina ngoSeptemba 2021 | I-Androidsis
UJose Alfocea | | IsiTshayina Android, SmartWatch
Ngaba ucinga ukuvuselela iwotshi yakho endala smart enye eneempawu ezingcono kunye noyilo lwangoku kunye nolunomtsalane kodwa awufuni kunamathela epokothweni yakho? Ngaba utsalelekile kumbono wokuba newatchwatch kodwa awukaqiniseki ncam ukuba uza kuyifumana eyona kwaye ngenxa yoko awufuni kutyala imali eninzi kakhulu kumava? Ukuba uzifumana ukwenye yezi meko zimbini, ke uye wafika kweyona ndawo ifanelekileyo.
Namhlanje kwi-Androidsis sikuzisa isindululo kunye nezinye ze eyona smartwatches itshayina intle. Ewe ndiyazi ukuba uninzi lweewotshi ezilumkileyo, iifowuni eziphathwayo kunye nezinye izixhobo zetekhnoloji zenziwe ngamaTshayina (okanye ezempuma ngokubanzi), kodwa ke apha sibhekisa kwiiwotsch zaseTshayina ezenziwe eChina zaza zathengiswa ziimpawu ezivela China Kwaye, njengoko unokuthelekelela, imalunga Iwatchwatch itshiphu kunesiqhelo, nangona sele ndikuxelele ukuba asizukukhokelwa kakhulu lixabiso. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi iimodeli esithetha ngazo? Ewe, qhubeka ufunda.
1 Amawotshi amaTshayina alo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
1.1 Inombolo 1 D5 +
1.7 UKingwear KW88
1.8 Ukuqala kwakhona i-R11
Amawotshi amaTshayina alo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
I-Smartwatch, 1.69 "Bukela ...
I-Smartwatch ECG, ukubeka iliso ...
I-NAIXUES Smartwatch Umfazi, ...
I-ANDUBEST Smartwatch, ...
Kwi-Androidsis siyaqhubeka nokuzimisela ukukubonisa ezona mveliso zilungileyo kwintengiso kwaye, ngaphezulu kwako konke, ezo ezinexabiso elingcono lemali okanye, njengakule meko, iiswatchwatches zaseTshayina ezihlala zingabizi kakhulu. Ngokucacileyo ezi zizindululo kuphela kuba, njengoko unokuthelekelela, asizazi ngokupheleleyo zonke iimodeli ezikhoyo kwintengiso. Ukongeza, inyanga nenyanga kusungulwa iimodeli ezintsha, uhlaziyo kwiewotshi esele zikhona kwintengiso, kunye neebranti ezintsha ezingakhange zinikezele ikhulu leepesenti zexesha lethu, sinokuvavanya, kuvavanye kwaye kuvavanye. Ke ngoko, namhlanje sikunika ukhetho lwe eyona smartwatches itshayina intle Ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezinje ngoyilo lwabo, izinto ezenziwe ngazo, ukuxhathisa kwabo kunye nokuzimela, iisenzi kwaye, ekugqibeleni, izinto zobuchwephesha ezijolise ekuqinisekiseni ukuba ngaba iwatchwatch ethile iyazifanela iimfuno zethu, kananjalo apha siyakubonisa cUkubeka iwatchwatch yesiTshayina ke awunangxaki kwakamsinya nje ukuba uyifumane. Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqale.
Inombolo 1 D5 +
Ngokuqinisekileyo ayivakali ngathi ininzi kuwe, nangona kunjalo oku Inombolo 1 D5 + es Olunye lolona khetho lubalaseleyo ngokwexabiso lemali onokuyifumana kwimarike yangoku kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ixatyiswe kakhulu ngabo bayisebenzisayo.
Inombolo 1 D5 + inoyilo oluhle kodwa olungekho sesikweni, umzimba wentsimbi kunye nescreen se-IPS ye-1,3-intshi kunye nesisombululo se-360 x 360. Ngaphakathi kuyo kugcina iprosesa ye-Mediatek MTK6580 ehamba ne-1 GB ye-RAM 8 GB yokugcina ngaphakathi. Ukulinganisa nje iigrama ezingama-78, zanele ukubandakanya I-450 mAh ibhetri Ungagcina ngayo usuku lonke, nangona, ewe, oko kuya kuxhomekeka kakhulu kusetyenziso olukhulu okanye oluncinci olunika iwotshi yakho. Enye yeempawu zayo ezibalaseleyo kukuba ibandakanya indawo yokuma yeSIM khadi, okt inikezela Ukudityaniswa kwe3G Ungayisebenzisa nokuba i-smartphone yakho ihleli ekhaya. I-GPS, isivamvo sokubetha kwentliziyo zezinye zezinto ezigcwalisa le smartwatch, ukongeza, eyiyo ukumelana nothuli namanzi.
Abanye benu banokucinga ukuba ndiyinyikimisile inombolo 1 D5 + kodwa ke, yenye yezona smartwatches zaseTshayina zibalaseleyo, nangona ingezizo ezona zitshiphu zichanekileyo. Ukuhlawulela, siza kwenza ukhetho olungabizi kakhulu kodwa kumgangatho olungileyo, NeeCoo V3, iwotshi efanelekileyo ene uyilo oluhle kakhulu iyahambelana nezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iPhone, ezenziwe ngesinyithi (i-magnesium kunye ne-aluminium alloy) enebhanti lesikhumba kunye ne-1,3-intshi IPS screen enesisombululo se-240 x 240, iBluetooth 4.0 I-380 mAh ibhetri. Inobunzima nje nge-64 yeegram kwaye nangona ingenawo amanzi, inexabiso elifanelekileyo elingaphantsi kwe-euro ezingamashumi asixhenxe. Ngayo unokubeka iliso kuyo yonke imisebenzi yakho yomzimba, ufumane izaziso kunye nokunye okuninzi.
Olunye ukhetho oluhle, ngakumbi kwabo banamathandabuzo ngakumbi malunga nokuba nokungabinayo iwotshi efanelekileyo kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo. IvenkileTEK ungafumana ntoni nge-25 nje yee-euro. Ukufana kwayo ne-Apple Watch kuyabonakala kwaye nangona kungafikeleli kumgangatho kunye nokusebenza kwaloo nto, inezinto ezinomdla njengazo uqhagamshelo lweselfowuni. Ewe, le MallTEK inokusetyenziswa kunye nekhadi le-SIM, ishiye i-smartphone ecaleni, kodwa ikwabonelela ngescreen se-1,54-intshi ngesisombululo se-240 x 240. I-380 mAh ibhetri, Ikhamera kwaye inobunzima kuphela iigram ezingama-62. Ngaba uyafuna ukungena kwihlabathi lewatchwatch? Ewe, olu lukhetho olufanelekileyo onokulufumana ngokugqitywa kathathu, isilivere, mnyama kunye nepinki.
Kodwa ukuba unomdla kuyilo lwewotshi ye-apile kwaye awuzimisele ukuchitha into efunwa ngabantu baseCupertino, le IWO 3 Ewe iyinyani yokwenyani yeApple Watch, kubandakanya nala Crown Crown ecaleni. Iyahambelana zombini iOS kunye nee-smartphones ze-Android kwaye ine-1,54-intshi IPS screen kunye nesisombululo se-240 x 240. Ngaphakathi ine-processor ye-MediaTek MTK2502C ehamba ne-138 MB ye-RAM, i-64 MB yokugcina kunye nebhetri. 350 mAh. Kuyacaca ukuba iphantsi kakhulu kwizixhobo kunye nesoftware kwiApple Watch, kodwa kusengqiqweni ukuqaphela ixabiso layo. Siyagxininisa ukuba, le yiwatchwatch yaseTshayina ilungele ngokukodwa abo bafuna uyilo olungaphezulu kokusebenza nangona unokulandela umkhondo womsebenzi wakho kwaye ufumane izaziso.
Kugqityiwe ngakumbi lelinye iqela lewotshi yeapile ebandakanya ikhamera kunye nokudityaniswa kweselfowuni ukuze uqhubeke nokuyisebenzisa nokuba awunayo i-smartphone yakho kufutshane. Imalunga nento encinci eyaziwayo Akukho mveliso ifunyenweyo ethi, ngexabiso lama-euro angamashumi asixhenxe nje, inike, ukongeza koku kuchazwe ngasentla, i-1,54-intshi 2.5D isikrini se-IPS kunye nesisombululo se-240 x 240, I-320 mAh ibhetri, IBluetooth 4.0, iprosesa ye-Mediatek MTK2502 kwaye iyahambelana nazo zombini ii-iPhone kunye nee-smartphones ze-Android.
Ngoku sijongana nokuthetha ngee-smartwatches ezimbini zaseTshayina ezinokuthi zingabi ngexabiso eliphantsi njengangaphambili kodwa ngokungathandabuzekiyo ziyimizekelo emibini ecacileyo yezona smartwatch zibalaseleyo zaseTshayina kwaye, enyanisweni, besele sithethile ngazo ngamanye amaxesha.
Siqala ngale nto ILEMFO LEMF5, iwotshi imbonakalo eyomeleleyo kunye noyilo setyhula ngamaqhosha amathathu asecaleni okusikhumbuza okuninzi ngeewotshi zobomi. Inika isikrini se-IPS esikwi-1,39-intshi kunye ne-400 x 400 isisombululo ngelixa entliziyweni yayo igcina iprosesa ye-Mediatek MTK6580 ihamba kunye I-1 GB ye-RAM kunye ne-8 GB yokugcina ngaphakathi ukuze uhlale uphethe isixa esifanelekileyo somculo kunye nawe. Inobunzima kuphela iigram ezingama-89, zanele ukubonelela nge I-450 mAh ibhetri y Ukudityaniswa kwe3G Ungayisebenzisa ngaphandle kwe-smartphone yakho. Ikwabandakanya i-GPS, isivamvo sokubetha kwentliziyo, njalo njalo. Ngokucacileyo, iwotshi esemgangathweni kunye nokusebenza okuphezulu kakhulu kunangaphambili, ngakumbi kumgca weNombolo 1 D5 + esiqale ngayo olu khetho kwaye ke, nexabiso lalo liphezulu.
Kumgca ofanayo womgangatho njengowangaphambili sifumana oku Akukho mveliso ifunyenweyo Nangona kunjalo, le modeli iphantsi ekusebenzeni kuneLemfo Lem5 kuba ihlala isiqingatha se-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, I-512 MB kunye ne-4 GB ngokulandelelana. Ikwabonelela ngokuzimela kancinci, I-400 mAh ibhetri kodwa ekuthandeni kwakhe une Ikhamera ye-2 MP kunye nobunzima beigram ezingama-65 kuphela ezenza ukuba kube lula. Iprosesa iyafana, iMediatek MTK6580 kwaye ikwanayo uqhagamshelo lweselfowuni.
Ukuqala kwakhona i-R11
Ukuba ukongeza kwizinto eziluncedo ufuna ubuhle, oku Ukuqala kwakhona i-R11 Ungayinxiba emitshatweni nakwiintlanganiso ngaphandle kokuqhushumba. Njengoko ubona, inikezela uyilo ngononophelo olukhulu, kunye imilo yakudala kwaye intle kwaye intambo. Iqukethe ukufana okuthile kwi-Moto 360 kwaye ibandakanya iindawo ezimbalwa ezoneleyo kubasebenzisi abaninzi. Ngaphakathi ngaphakathi kukho iprosesa ye-Mediatek MTK2501, i-128 MB ye-RAM, i-64 MB ye-ROM ngenkxaso ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-32 GB, NFC, ibluetooth 3.0 yokunxibelelana, ibhetri ye-450 mAh, inzwa yokubetha kwentliziyo kwaye iyahambelana ne-iPhone kunye ne-Android. Ewe ulumke kuba AKUKHANGISI manzi.
Ndiqinisekile ukuba le wotshi ayivakali ngathi iyinto kuwe, nangona kunjalo inoyilo endiluthandayo (ngakumbi kumnyama) kunye nexabiso elingaphezulu kwexabiso elifikelelekayo, ngaphezulu nje kwe-euro ezingama-XNUMX. Imalunga nayo Rubility KW18, uyilo olujikelezayo lwe-Chinese smartwatch enobunzima be-68 gram kuphela, ezintathu ezigqityiweyo, isikrini se-1,3-intshi, iprosesa ye-Mediatek MTK2502 ekhatshwa yi-64 MB ye-RAM, ibluetooth 4.0, 340 mAh ibhetri, isivamvo sokubetha kwentliziyo, esihambelana ne-iOS kunye ne-Android, engenawo manzi, uqhagamshelo lweselfowuni, Ixhasa ikhadi le-MicroSD.
Kuqhelekile ukuba xa sithetha ngamawotshi amaTshayina (okanye nayiphi na imveliso yamaTshayina) sihlala sicinga ngokuzenzekelayo ngemveliso yexabiso eliphantsi kunye nexabiso eliphantsi, nangona kunjalo, njengoko sele sibonile, oku kuyinkolelo eyaziwayo kunokwenyani. Ngelixa kuyinyani ukuba ii-smartwatches zaseTshayina zihlala zitshiphu, uluhlu lwamaxabiso kunye neempawu zikwabanzi kakhulu Ke eyona nto iphambili ilele ekwazini ukuba kutheni siza kuyisebenzisa iwotshi yethu efanelekileyo, ukuba siza kuyisebenzisa yonke imihla kakhulu, ukuba siyayifuna ukuze isebenze ngokuzimeleyo kwi-smartphone yethu, njalo njalo.
Yintoni iwatchwatch yesiTshayina ungongeza kuluhlu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » Eyona ndlela ibalaseleyo yamaTshayina
Ndingadibanisa i-amazift bip kunye nesantya esiziwotshi zemidlalo kunye namaxabiso amahle ngeGPS
Kwaye iphi i-Domino DM368 Plus? okanye iFinow X5 AIR? ...
Eli nqaku liswele uphando.
I-KW18 edwelisiweyo ayisiyo eyokuqala, yiKingWear k1w8
Lemfo kW 10, ndingathanda ukubanakho ukubatshintsha okanye unako? Ndiyabuza?
ingelosi yentili sitsho
Ndikhangela iSmartWatch, ngaphandle kweAPLELE…. nge-ECG -Electrocardiogram- (eqinisekisiwe ngokwezonyango) ndiyazi ukuba uXiaomi unalo msebenzi unoluhlu njenge-Samsung ...
Enkosi ngephepha lakho elihle.
Ingelosi del Valle
Phendula ingelosi del valle
Ngaba i-4G Smartwatch eneSIM khadi "inika i-intanethi" umzekelo kwikhompyuter efana neMac mini ngeWi-Fi?.
Oko kukuthi, ukuba nge-4G Smartwatch eneSIM khadi, ungenza okufanayo nakwifowuni.